January 27, 2021 Xuseen 10
Puntlandtimes (Garoowe)-Sheekh Mustafe Xaaji Ismaaciil Haaruun oo kamdi ah culimaa’udiinka Soomaaliyeed ayaa faahfaahin ka bixiyey safar siweyn loo sugayey oo uu maanta ku tegey magaalada Garoowe ee caasimadda dowladda Puntland.
Sheekh Mustafe ayaa ugu horrayn ka mahadceliyey soo dhoweynta ballaaran ee Garoowe loogu sameeyey, wuxuuna sheegay in Garoowe ay tahay magaalo raadweyn ku leh, maadaama uu joogi jirey AUN Sheekh Cabdulqaadir Nuur Faarax.
“Magaaladatani waa magaaladii Sheekhaygii AUN Sheekh Cabdulqaadir ayey ahayd magaaladiisii, aniguna waxaan oran jirey dee meel sheekhaygii joogi tegi maayoo wax ka akhrin maayee wadanka gudihiisana imbadan maan soconine dee Soomaalida dibadda ku daasheybaan islahaa bal haddii gaalada laga reebi karo” ayuu yiri Sheekh Mustafe Xaaji Ismaaciil Haaruun.
Sheekh Mustafe oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri,”Waa markii 1aad ee aan wadanka isku dayo inaan dhex socdo, Inshaallaah waxbadan ma sidee dee dadka uun aad baratid baan lee yahay waana isbaran doonaa Haddii Alle idimo”. ayuu hadalkiisa ku soo gunaanadey Sheekh Mustafe Xaaji Ismaaciil Haaruun.
To: All Soomaali
Shaqsigii caay iyo aflagaado u geesta reer dhan ama reer Issaaq oo waliba diintooda shaki dadka ka geliyo ama gabayo waqtigii Sayidka la tiriyay hadal qabsi ka dhigta waxaan xasuusinayaa in shaqsigaas Sheikh Mustafa iyo culuma kale aan wada jecelnahay reerkaas ku wada jiraan.
Talo ku socoto Soomaalida markaad caaytameysidi (waloow cayda naftigeeda ee khalad tahay haddana..) ha ku ekaato shakhsiga aad is haysiin ee reerkiisa oo dhan in aad wax ka sheegtid iska ilaali.
Sheekha weyn Ee reer Somaliland alah ha dhowro waa Caalim weyn Somalidan wanaaga fara iyo inay Dariiqa saxda ah Ee ALE qaadaan taas ayaana If iyo Aakhiraba lagu liibaanayaa.
Alah hafido waxa uu ka mid yahay Aqoonyahanadda Faraha badan ee ALE ku mutaystay Duriyada Reer Sheekh Isxaaq.
Waan ku mahadadsantahay Wanaagaa aad umada farsyso Alana Ha farsnsiiyo, laakiin dad badan ayaa halkan si xun u Aflagaadeeya qabiilka Isaaqa waxay ku haystaan lama yaqaan, waxay ka rabaan lama yaqaan, waxay ku neceb yihiin lama yaqaan, waa yaab iyo amakaag inaad umad Ilaahay abuurtay iska nacdo xigdi iyo xumaan aanay kuu geysan ladaba gasho waa wax aad loola yaabo.
Dadka qaar baan waxba soo qorin karin ilaa ay Isaaqa Caayaan bal u fiirso mawduuc kasta way ku lifaaqayaan cayda isaaqa bal maxay ka heleyaan oo faaido ah naftooda ayuu nacaybka iyo xasedkuba ku noqonayaa waayo cidna waxba ma yeeli karaan.
Waxay u badan yihiin Qurbajoog Nolosha ka dhacay Reerahoodiina dayacay caydha gaaladana Dawarsada dadka noocaas ah ayaa dadkaa Somaliyeed Ee sharafta ku nool waxka sheegaya Nacalatula caleek yaa xayawaaniin.
Waxa keliya isaaq lagu colaadinayo waa maxaa wax u noqoteen oo dalkiina u dhisateen.
Reer somaliland waxay ahaayeen Indhihii iyo maskaxdii somalida kala maamuleysey dhinac walba Aqoon, Hanti, daacadnimo, dal jacayl Iwm, markay ka tageena waataa ilaa hada Somali koonfureed isku dul meeraysaneysa dalkoodiina Qurub qurub loo boobayo iyagiina Goroda iskula jiraan sidii xayawaankii mudo 30 Sano.
Reer somaliland wax xumaan ama nacayb cidna uma hayaan laakiin waxay meel kusoo ogaadeen in somali isku habsaantey waqti danbe iyo midnimo danbana aanay marnaba qayb ka noqon waayo hore ayaa somali isku dul habsaantey Asaageedna ka hadhay iyo khayrkeed in mardanbe Wadadii lagu jabay dib loo qaado waa wax aan caqliga Saliimka ah qaadi karin.
Sheikh Mustafa qofkii wax ka sheega waa qof aan waxba garanayn amaba garaadkiisu dhamayn, sidoo kale qof kii beel soomaaliyeed waxka sheega warkiisu sii akhris ma leh mana ahan qof wax kala garanaya, waayo umad dhan oo sheekh iyo shariif leh qaarkoodna ay aduunyoba ka faaruqeenen qof wax ka sheegaya inaad sii dhegaysato waa kuu dadnimo xumo iyo diin la aan, qof ku qof iyo qofaf waxbuu ka sheegan karaa wolow iyadu qudheedu aysan fiicnayn balse umad dhan qof afka saaray hadalkiisu waa hadal jaahil.
Waxa wax laydin kaga sheegayo waxaa ka mid ah,
Puntland uma quurtid in aad tiraahdid waa meel aamin ahoo degen
Marka adigu dib isku eeg
Hadalkaas wuxuu ku socda nin isku bixiyay runsheeg.
Bal wax buu nacladaya markaas ayuu runsheeg is kugu yeeraya, xayawaan .
Dhulkiina iska iimaan-sada intaad dad kale haba ku duuleysaan.
Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, WAXAAD TAHAY XOOLO MAANGAB AH WAAYO CULUMADA RUNTA AH MALAHA QABIIL. WAXAAD TIRI REER SOMALILAND AMA REER ISAAQ WAA INDHA IYO MASKAXDA SOOMALIDA WAAD KU QALDAN TAHAY ISAAQ WAXAA KA BUUXA KUWA XOOLO AH LA DAAQA XOOLAHA MAAMULKA SOMALILAND WAAN OG NAHAY DHIBKA KA JIRA SHAQO LA AAN DHAQAALO XUMI IYO CADAALAD DARO XITAA QASHINKA HARGEYSA LAMA ARUURIYO. TEEDAKALE MA OGTAHAY IN SHIIKH MUSTAFA INUU KA BAXEY JAAMACADA UMMADA 1981 CIVIL ENGINEERING. REER GAROOWE SI WANAAGSAN AYEY U SOO DHAWEEYEN SHIIKHA, SHIIKH MUSTAFA WAA SHIIKH YAQAAN DIINTA IYO MAADIGA.
Hadda ka hor nin Majeerteyn Cumar Maxamuud ah baa AUN Cabdullaahi Yusuf marka Madaxweynaha Puntland ka codsadey in uu la kulmo nin madax ka ah tabliiqa Soomaaliya.
Ninkii Cumar baa aad u ammaaney wadaadka tabliiqa si uu Cabdullaahi u ogolaado lakulankiusa.
Cabdullaahi baa ku yiri ninkii adiga maxaad ka tahay ururka tabliiqa wuxuu ugu jawaabey xattaa xubin kama ahi…
Cabdullaahi baa intuu qosley ku yiri markaad ururka tabliiqa ka noqotid Guddoomiye ama Guddoomiye kuxigeen ii keen ciddii aad rabtid waan lakulmayaa laakiinse urur aadan waxba ka aheen ha aheen dadkaaga ha ku hoosaasin.
KKK Ninkaas Cumar Maxamuud waxuu ahaa qof maskiin waxeey ahayd in uu ugu jawaabo waxaan ahay Madaxweynaha Cumar Maxamuud ee ururka Tabliiqa. KKKKKKKK
Ninka Cumar Maxamuud ninka uu wado waa nin iidoor reer Burco ah oo ahaa guddoomiyaha Tabliiqa Soomaaliya.. Burco farsamooyin badanaa..
Hadda u fiirso kuwa soo dhoweynaya Sheekh Mustafa oo dhabar kuwata waa dad iska allow sahal ah oo waxba lasocon oo lagu shqeysankaro..ma garankaraan ujeedada rasmiga ee Sheekh Mustafa.
Sheekh Mustafa reerkiisa oo Soomaali kala dilaya weligiin ma aragteyn isagoo wax u sheegaya maxay tahay waxa ka soo galay Garowe…
Sheikh mustsfe oo siyaasadaha isdiidan somalida dhexmuquuransya wali ma arag dadka waxuu wax u fahamsiyaa si colmiyaysan khayr ala ha siiye eh marka somaliyeey. Halyaygaan dhaafa. Dadka somliyeed in badan gudo iyo dibad waa (Saykubaat) waxa wax u dhimay burburki iyo dagaladii sokeye waa u baahnahay dad (cilminafsiga)wax la yaqaan. qof qof iska caayaya mid qof ku dilaya wax aan wax ahayn waxyabahaas waa jiroyinka dhanka maskaxda ha u malaynina qofkastoo oo dharqaba oo soconaya gudanayana nolol maalmeedkiisa inuu fayawyahay.ka dheerada fadhi ku dirirka wax aan dani ku jirin in aan waqti ku lumisaan wsc